Dia tandremo fa aterina eto ny tsara sy ratsy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsetsatsetsa tsy aritra no aroso alohan’ny hivalamparan’ny resaka. Interinety no voambolana ampiasaiko eto raha mandika ny voambolana internet ho amin’ny fiteny malagasy ny tenako. Maro no mampiasa ny aterineto. Izay tokoa no aroson’ireo mpikaroka ary efa voarain’ireo mpikirakira vaovao. Saingy… Raha mandre ny hoe aterineto ny sofika dia “aterina eto” no reko. Ireo mampiasa ny interinety anefa dia mahafantatra fa tsy aterina eto fotsiny no atao amin’ny interinety fa ao koa ny mandefa any ary misy ny fitehirizana any an-drahona any. Marihina fa sehatra mampijaly ny teny malagasy raha ity tontolon’ny interinety ity. Mila ordinatera ny fampiasana azy ka ordinatera sa solosaina no ilazana azy ? Tsy olana kosa angamba ny fahafahana mampiasa ireo voambolana roa ireo. Fa ny tena manahirana dia ny fanomezana ny adiresina tranonkala. Matetika dia misy www ilay adiresy. Ny litera malagasy anefa tsy manana “w”. Ka ahoana no hatao ? Hampidirina ve ny “w” ?
Izay no lava izay no fohy hoy ny mpikabary. Ndeha hifantohana ny resaka interinety azo antoka.
Ohatra telo no ndeha ho singanina mahakasika ny interinety.
Ny voalohany dia ity resaka viriosy na virus ity. Samy manana ny olana efa niainany ny tsirairay izay miserasera eto amin’ny tontolon’ny interinety. Tao no simba tanteraka ny ordinatera. Ny nahavoa ny tena vao haingana teo izao dia ilay viriosy SergeLeLama.vbs. Avadik’io viriosy ho lasa rangopohy na raccourci (dikateny ahy io fa tsy mbola an’ny daholobe akory an) ireo ampidirina anatin’ny clé usb na flash disk na carte sd (angamba aleo tsy asiana dikateny fa mbola tsy manana aho). Ny loza dia rehefa entina any amin’ny ordinatera hafa dia avy hatrany dia fafan’ny antivirus ireo rangopohy ireo. Very ilay asa. Dia eto kosa no mahatsara an’ity interinety ity. Mametraka fanontaniana ianao hoe : “Misy ity virus SergeLeLama.vbs ity ka inona no fanefitra ?” Dia naterina eto tokoa ny valiny. Na amin’ny fiteny malagasy aza ny fanontaniana no napetraka dia mahay teny gasy ilay mamaly any ambadika any. Izao no ataonao… Manaraka izay lazainy dia afaka olana.
Ny olana faharoa dia ireo mpamaky trano na hackers. Isan’ny tratra vao hainga teo ny tranonkalan’ny Instat. Nitsofohan-dry zalahy silamo mahery fihetsika. Raha any andafy any dia matetika re fa misy ireo kaonty misy vola no misy mitsofoka ankeriny ka maka izay vola ao. Misy koa ny mampiasa ny kaontinao mba hampitana sary vetaveta na hevitra ratsy hafa. Fahita matetika izany eo amin’ny tontolon’ny facebook. Indraindray sangy mihoatra ny loha no nataon’izay manao izany. Raha izay fotsiny tokoa moa maninona…
Isan’ny hita koa ny fisian’ny fisolokiana maro karazany eo anivon’ny tontolon’ny interinety. Na amin’ny alalan’ny mailaka (mail) izany na amin’ny alalan’ny resaka eo amin’ny facebook. Marihina fa efa hita aty amin’ny sms ihany koa izany fisolokiana izany.
Misy ve fiarovana azo atao manoloana izany rehetra izany ? Raha orinasa aloha dia ny fananana mpiasa raikitra mahafehy ny fiarovana ara-informatika no tsy maintsy apetraka. Raha ho an’ny olon-tsotra kosa dia ny fitandremana no voalohany. Matetika zavatra mahafinaritra no alefan’ireo olon-dratsy ary dia roboka ny olona mijery io rohy io. Ny fifanakalozana amin’ny hafa dia lakile iray. Ao koa ny fametrahana hidintrano tahaka ny antivirus ary fanamafisana izany. Isan’ny miverina matetika ny filazana fa ilaina ovaina matetika ny teny fanalahidy na mot de passe. Marihina fa ny fidirana an-keriny sy/na fanimbana fananan’olona eto amin’ny resaka informatika dia mahavoasazy araka ny lalàna http://www.assemblee-nationale.mg/?loi=loi-n2014-006-lutte-contre-cybercriminalite (andininy faha-6 sy faha7). [Art.6.- Quiconque aura accédé ou sera maintenu, frauduleusement dans tout ou partie d’un système d’information selon les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, sera puni de 100.000 Ariary à 10 000 000 d’Ariary d’amende.
Lorsque l'accès ou le maintien frauduleux, dans tout ou partie du système d'information, auront, soit endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré ou supprimé des données informatiques contenues dans le système, soit entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie de ce système, la peine sera celle de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 100.000 Ariary à 10 000 000 d’Ariary ou l’une de ces peines seulement.
Art.7.- Quiconque aura, frauduleusement, introduit, endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré ou supprimé des données informatiques ou agit frauduleusement de manière à modifier ou à supprimer leur mode de traitement ou de transmission sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.]
Isan’ny olana koa eo amin’ny tontolon’ny interinety dia ny fahaizana mandray ny ao anatiny. Mety ho vaovao diso tanteraka no voizina ao. I Nono mpihiran’ny tarika Mahaleo dia efa indroa maty vao tena maty tokoa. Ny voalohany dia nisy nandefa vaovao fa maty izy. Kay vaovao diso. Vetivety dia niparitaka ilay vaovao diso. Misy polisy ve hanenjika izay minia manely vaovao diso na tsaho ? Ny lalàna aloha dia misy afahana manasazy izay maniratsira. Nolaniana tamin’ny volana volana jiona 2014. Io ilay lalàna “n°2014-006 sur la lutte contre la cybercriminalité” hita eo amin’ny rohy :
http://www.assemblee-nationale.mg/?loi=loi-n2014-006-lutte-contre-cybercriminalite. Ny andininy faha-20 :
Tahaka izao no voalaza mikasika ny faniratsirana :
Samy mampita izay hevitra tiany ho voizina tokoa eo amin’ny interinety. Habakabaka malalaka sy midadasika. Samy mametraka dian-tanany sy sorany. Izay tsy mitandrina dia mandray ny hevi-diso. Raha eo amin’ny tontolon’ny facebook mbola heverina fa misy ny mpandrindra na administrateur raha vondrona na groupe ilay nandefasana ny vaovao ka afaka manala ilay vaovao diso nalefa. Raha eo amin’ny interinety kosa tsy misy fa dia malalaka. Ny mpampiasa sy mpikaroka vaovao no mila mailo fa indrindra ny mpianatra amin’izao rafitra LMD izao. “Mahaiza mitandrina mba tsy ho vaky andrina” hoy ny fiteny mahazatra.